Yini ukusetshenziswa kocingo lokushisa oluphezulu lwe-silicone?
Intambo yokushisa ephezulu ye-Silicone inezinga lokushisa eliphakeme kakhulu nokumelana nokushisa okuphansi, ukusebenza okuhle kakhulu kokufakwa kagesi, ukuzinza kwamakhemikhali okuhle kakhulu, ukumelana namandla kagesi, ukumelana nokuguga, nempilo yenkonzo ende. Futhi ithambile futhi kulula ukuyifaka. Abicah lokushisa eliphezulu wire h ...
Uyini umehluko phakathi kwenhlangano yekhebula kanye nezintambo ze-wire
Izintambo zikagesi ziyimithambo nengxenye efihliwe ebalulekile yezimboni eziningi. Lezi zingcingo zibalulekile ngoba zisekela amabhizinisi anjalo ukuze aqhubeke ethuthuka. Indlu nayo idinga izintambo noma amakhebuli ukuthola ugesi ukuze isebenzise izinto zikagesi nezinye izinto zikagesi ....
Isingeniso solwazi oluyisisekelo lwe-wiring harness I
Uchungechunge lwe-Wire Harness 1. I-Wire Harness: Isetshenziselwa ukuxhuma izintambo ezimbili noma ngaphezulu ezinezinto zokudlulisa okwamanje noma amasiginali. Kungenza lula inqubo yomhlangano yemikhiqizo ye-elekthronikhi, kulula ukuyigcina nokuyithuthukisa, futhi ithuthukise ukuguquguquka kokuklama. Isivinini esikhulu nokufakwa kwedijithali kwe-signal tra ...
Ukukhethwa kwezixhumi zokubopha izintambo zezimoto Isixhumi siyingxenye ebalulekile yehhanisi lezintambo, elisetshenziselwa ukuxhuma nokuvikela i-harness wiring. Ukuqinisekisa ukudluliswa okujwayelekile kwamandla nezimpawu, ukukhethwa kwezixhumi kubaluleke kakhulu. Lo mbhalo wethula ukuqaphela ...
Izixhumi ezahlukahlukene zikagesi ziyizinto ezisemqoka kumadivayisi amaningi kagesi ngoba angabona futhi avikele ukudluliswa kwezimpawu zikagesi. Ukusuka ekuxhumaniseni izingxenye zamakhompiyutha ezingukhiye kuya ezintanjeni zokuxhuma ezimotweni esizishayelayo, badlala izindima ezahlukahlukene, nezinhlelo zokusebenza ...
Ngonyaka owodwa, izigidi zezimoto zenziwa emhlabeni wonke. Ngenkathi izitayela, izingxenye nezici kungahluka, yonke imoto idinga ukuboshwa ngocingo. Ihhanisi lixhuma izintambo kuyo yonke imoto, inika amandla yonke into kusuka esiteringini samandla namalambu angaphambili ukuya kudeshi ...
U-Olink Ukubamba iqhaza Embukisweni